Wararka Maanta: Khamiis, Dec 31, 2020-Siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee Geeriyootay Sanadkan 2020
Khamiis, December, 31, 2020 (HOL) -Sanadkan inaga sii dhamaanaya ee 2020 Soomaaliya marka la eego waxaa uu u ahaa sanad ay isku biirsadeed deggenaan la'aan siyaasadeed, Jawi Doorasho, Qaraxyo galaaftay nolasha dad badan oo Soomaaliyeed iyo waliba geerida dad Soomaalida magac iyo maamuus ku dhax la'ahaa.
Dhinaca Amaanka marka la eego sanadkan waxaa dhacay Qaraxyo waaweyn oo galaaftay nolasha dad badan oo mas'uuliyiin iyo Shacab isugu jiray, waxaana ugu danbeeyay qaraxii 18kii bishan December ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ku dhinteen 16 ruux oo ay ka mid ahaayeen saraakiil sar sare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Cudurka Coronavirus ayaa dhankiisa saameyn weyn lahaa sanadkan oo ay u geeriyoodeen mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin caan ah, kuwaa qaarkood xilal sare ka soo qabtay dalka.
01, April 2020 waxaa magaalada London ee dalka Britain ugu geeriyooday cudurkan Ra'iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof Nuur Xassan Xusseen Nuur Cadde oo la sheegay in uu muddo la xanuunsanayay Coved 19.
12, July 2020 waxaa isna cudurka Kansarka dalka Turrkiga ugu geeriyooday Alle ha u naxariisteen Xassan Abshir Faarax oo horey dalka Ra'iisal Wasaare uga soo noqday.
08, October 2020 waxaa magaalada Jigjiga cudurka Covid 19 ugu geeriyooday Ra'iisal Wasaarihii hore ee dalka Prof Cali Khaliif Galeyr oo laakiin markii danbe ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo State. Wuxuu ahaa Aqoonyahan Soomaaliyeed, Siyaasi Caan ah iyo waliba Macalin wax ka dhigga Jaamacado heer caalami ah.